Relationship – santhit.com
အိုသွေးတွေရဲ့ ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်
အိုသွေးတွေရဲ့ ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ စိတ် ___________________ 1) ချစ်သူအပေါ် စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောဆို တတ်ကြတယ် 2) စိတ်တိုင်း မကျတာ တွေ့တိုင်း ပြောဆိုတတ်ကြတယ် 3) အိုသွေး အပေါ် ချစ်သူက အရေးမလုပ်ရင် ဝမ်းနည်း အားငယ်တတ်ကြတယ် 4) ချစ်သူအကြောင်းပဲ ခဏခဏ တွေးနေတတ်ကြတယ် 5) ချစ်သူကို ကိုယ်ကလွဲပြီး တခြား လူကို အရေးလုပ်တာ အလေးထားတာမျိုး လုံးဝ မကြိုက်ကြဘူး 6) သံယောဇဉ် တအားဖြစ်တတ်လွန်းလို့ ချစ်သူကို စိတ်မချတဲ့ အတွေးတွေ…
Khant Hein March 22, 2018 Relationship No Comments
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး​လေး​တွေ အ​ကြောင်း
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး​လေး​တွေ အ​ကြောင်း ********************************* ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဟာ အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်တဲ့နေ့နာမ်များပဲဖြစ်တယ် အပြင်မှာအေးသလောက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ ပျော်ပျော်နေ တတ်တယ် စကားချိုချိုနဲ့အတည်ပေါက်စတတ်နောက်တတ်တယ် ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဖြစ်အောင်ကို ကြိုးစားပြီးလုပ်တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ ကိုယ်တကယ် ဝါသနာပါတဲ့ အရာကိုလုပ်ရင်လည်း အောင်မြင်တတ်သလောက် စိတ်မပါတဲ့အရာ ဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးထိလက်လျော့ထားတတ်တယ်.. အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှ စိတ်ကူးဥာဏ်ကောင်းတယ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဘယ်တော့မှ လက်မလျော့တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ.. ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ မာနကို သိပ်ပြီးအလေးမထားတတ်ဘူး။ စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်ပြီးရင်လည်း ပြန်ချော့တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူး သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ…
Khant Hein March 22, 2018 March 22, 2018 Relationship No Comments
#အချစ်က်ိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူက သူရဲ့အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူနဲ့ ကျောခိုင်းခဲ့တာဟာ သူမှန်တယ် စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူက… သူနဲ့ စိတ်သဘောထား မတူသူနဲ့ ခပ်ကင်းကင်းနေတာသူမှန်တယ်။ မေတ္တာတရားကို အသက်လို … တန်ဖိုးထားတဲ့ သူက သစ္စာမရှိတဲ့သူနားက လှည့်ထွက်လာတာ သူမှန်တယ်…။ မိသားစုတာဝန်အရပ်ရပ်ကို လျစ်​လျူမှုမရှိပဲ အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကို အပြည့်အ၀ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ယောက်ကျာ်းဟာ သူ့နောက်ကွယ်မှာတိတ်တိတ်ပုန်း ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကို လမ်းခွဲပြတ်သားနိုင်တာဟာ သူမှန်တယ် ။ မိသားစုဘဝကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ …. မိန်းမဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ယောင်္ကျားကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်တာဟာ သူမှန်တယ်…။ အရည်းအချင်းရှိတဲ့ ယောက်ကျာ်းဟာ သူလက်တွဲမဲ့သူကို မပြည့်စုံရင်နေ အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်က်ုိကျေပွန်အောင်လုပ်စေချင်တာဟာသူမှန်တယ်…
ကိုယ်သတိရတဲ့အခါ …တိုက်ဆိုင်စွာ သူလည်းသတိရချင်ရနေမှာပဲမပတ်သက်ကြတော့ပေမယ့်မုန်းလို့လမ်းခွဲတာမှ မဟုတ်တာ
#ပျော်ပါတယ် …. ကိုယ်သတိရတဲ့အခါ … တိုက်ဆိုင်စွာ သူလည်းသတိရချင်ရနေမှာပဲ မပတ်သက်ကြတော့ပေမယ့် မုန်းလို့လမ်းခွဲတာမှ မဟုတ်တာ …။ လရောင်က လှတယ် … ငေးမောမိတော့ လွမ်းဆွတ်ရပြန်ရော ကိုယ်မပြတ်သားပေမယ့် သူပြတ်သားခဲ့ပါလား ဒါပေမယ့် လည်းလေ လသာတဲ့အခါ လရောင်ကိုငေးရင်း လွမ်းရုံသက်သက် သူလည်းလွမ်းနေနိုင်တာပဲ ဒီလိုတွေးပြီးလည်း ပျော်ပါတယ် …။ ဘာမှတော့ မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ … ထာဝရပြီးဆုံးပြီပေါ့ လွှင့်မပစ်ရက်တဲ့ လက်ကျန်သံယောဇဉ်တစ်ချို့တော့ ကိုယ်ဘက်မှာ ရှိနေသလိုပဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်စရာ မရှိတော့ပေမယ့် အကွယ်ကနေ သူ့ကိုစောင့်ကြည့်မိတာတွေရှိသေးတယ် သူလည်းပဲ ကိုယ်မသိအောင်…
ချစ်သူတွေကို ဝေးကွာသွားစေတဲ့အချက်များ………. ချစ်သူတွေဆိုတာ……… နားလည်မှုတွေ မရှိတဲ့ အခါမှာလည်း… ချစ်လျှက်နဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားတာပါပဲ ချစ်သူထက် အပေါင်းအသင်းတွေ ဦးစားပေးတဲ့ အခါမှာလည်း… သည်းခံမှုတွေ ကုန်ဆုံး စိတ်ဝမ်းတွေ ကွဲစေတာပါပဲ ဥပေက္ခာတွေ ပြုဖန်များလာတဲ့ အခါမှာလည်း… ရင်ခုန်မှုတွေ ဆိတ်သုန်း စေတာပါပဲ ပကာသနတွေ မက်မောလာရင်လည်း… ဝေးကွာစေတာပါပဲ ကတိသစ္စာ တန်ဖိုးမထားတဲ့ အခါမှာလည်း… ဝေးကွာစေတာပါပဲ ရှေးရေစက် ကုန်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း… အချစ်တွေပျယ် ဝေးကွာစေတာပါပဲ တစ်ယောက်မြတ်နိုးမှု တစ်ယောက်က တန်ဖိုးမထားတဲ့ အခါမှာလည်း… ဝေးကွာစေတာပါပဲ…
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ” ခယ ” အောက်ကျို့ ﻿ချစ်﻿﻿နေရမယ့် ခပ်﻿လွယ်﻿လွယ်﻿ မိန်းခလေး မဖြစ်စေနဲ့…
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ” ခယ ” အောက်ကျို့ ﻿ချစ်﻿﻿နေရမယ့် ခပ်﻿လွယ်﻿လွယ်﻿ မိန်းခလေး မဖြစ်စေနဲ့… ယောက်ျားတစ်ယောက်က အသည်းအသန်﻿ လိုအပ်﻿လို့ လိုက်﻿ဆွဲ﻿နေရတဲ့ တန်﻿ဖိုးမြင့် မိန်းခလေးပဲ ဖြစ်ပါစေလေ။ _________ ယောက်ျားတစ်﻿﻿ယောက်﻿﻿﻿ အတွက်﻿နဲ့ ဘဝတစ်﻿ခုလုံး ပြိုလဲ ပျက်﻿စီးသွားရမယ့် တုံးအတဲ့ မိန်းခ﻿လေး မဖြစ်﻿﻿စေနဲ့… ယောက်ျား တစ်﻿﻿ယောက်﻿﻿ကြောင့် အလှဆုံးမဲ့ ပြုံးတစ်﻿ချက်﻿နဲ့ ပြန်﻿လာနိုင်﻿တဲ့ ခပ်﻿﻿ချေ﻿ချေ မိန်းခ﻿လေးပဲ ဖြစ်﻿ပါ﻿စေ﻿လေ။ _________ ယောက်ျားတစ်﻿﻿ယောက်ရဲ့ အရုပ်﻿တစ်﻿ရုပ်﻿လို ကစားတာ ခံ﻿နေရမယ့် ﻿ပျော့ညံ့ညံ့ မိန်းခ﻿လေး…
နေရာတိုင်းမှာ ဦးဆောင်နေရတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်က လိုတာထက် မချိုသာတတ်ဘူး။
နေရာတိုင်းမှာ ဦးဆောင်နေရတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်က လိုတာထက် မချိုသာတတ်ဘူး။ ☝️ စိတ်ဆတ် လိမ့်မယ် 😏 စိတ်ထား မကောက်ကျစ်ဘူး… 😡 ဒေါသကြီးရင် ကြီးမယ် 😊 အချိန်ကြာကြာ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး… 👈 ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံတတ်တယ် 😝 ဟန်မဆောင် တတ်ဘူး… 😏 မာယာ မများဘူး ☝️ ရဲရင့်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်… 😑 အိနြေ္ဒကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ မနေတတ်ဘူး၊ 😁လူအများနဲ့ နေရတာ နှစ်သက်တယ် 😎 နေရာတကာ…